Yoga no rafitra indianina tranainy indrindra izay ahafahanao mampifanaraka ny vatanao sy ny fanahinao, manao fanatanjahan-tena manokana ary manaiky filozofia sasany eo amin'ny fiainana. Tsy ho afaka hahatakatra ny lafiny rehetra amin'ity siansa mahatalanjona mahatalanjona ity ianao, raha toa ianao ka mandray lesona fotsiny amin'ny endrika lamaody na mieritreritra fa ny yoga dia fanatanjahantena ho an'ny lamosina na kibo. Ny tsara indrindra dia mila manomboka amin'ny teoria ianao - mijery ireo boky, mahatsapa ny fahendren'ny filozofia eo amin'ny fiainana izay omen'ny yoga, ary avy eo vao manomboka amin'ny fampiharana ny yoga.
Ny Yoga ho an'ny mpianatra dia mitaky fampiharana mahagaga amin'ny fahatsorany. Tsara kokoa ny miantso azy ireo asanas - ny fianarana manokana izay tokony horaisina dia antsoina hoe fomba toy izany. Andeha hodinihintsika ny fampiharana fototra (asanas) an'ny yoga:
Fampiasana tsotra ho an'ny yoga: tadasana, na manangana MOUNTAIN . Avy amin'izany no manomboka ny komplexa iray. Tena ilaina ny fampiasana yoga toy izany ho an'ireo vehivavy manana olana amin'ny fihetsika. Mitsangàna miaraka amin'ny tongotra mivantana, mivangongo mivantana, mihenjana ny hozatry ny feny, mitsangana kely ny lohany, mihodina ny soroka, mihintsana ny tanany eo amin'ny vatany, mihaingo ny tarehiny. Mipetraha eo afovoan'ny vatanao ary mijoro mandritra ny 1-2 minitra.
Vrksasana, na ny Pose de TREE. Ny fampiasana yoga toy izany dia mora atao ao an-trano. Mijoroa eo amin'ny MOUNTAIN POSITION voalaza tetsy ambony, avy eo toho ny tongotra havanana amin'ny lohalika ary afindra amin'ny lohalika ny lohalika. Raiso ny paozinao amin'ny tananao ary apetaho eo amin'ny feny ankavia, akaikin'ny valizy. Ny lohalika ankavanana dia tokony ho eo amin'ny fiaramanidina iray ihany miaraka amin'ny vatana, aza manongana na mihemotra. Manafoha, atsangano ny tànanao havanana, mifandray tanana. Raha izany dia 1-2 minitra ary manova ny tongotrao hamerina ny fanatanjahantena miaraka amin'ny tongotra fanohanana hafa.
Trikonasana, na ny fizotry ny triatra. Ny fanatontosana toy izany ho an'ny yoga vao haingana dia tena mahasoa ho an'ireo izay manana asa an-terivozona. Mijoroa amin'ny mahazatra, mamelatra ny tongotra 1 m. Ny tanana dia mivelatra eo amin'ny andaniny roa mifanaraka amin'ny tany, manopy ny palmie. Atsaharo ary miankavia miankavanana, hikasika ny gorodona amin'ny tananao havia eo akaikin'ny tongotra. Mitsangàna ary mijery ny palma havanana. Mijanona fotsiny mandritra ny fotoana fohy. Amin'ny atidoha, miverena any amin'ny toerana voalohany. Avereno ho an'ny andaniny ny andaniny, ary ataovy feno in-dimy isaky ny andaniny ny fampiasana manontolo.
Bhujangasana, na ny sarin'ny Snake. Io toerana io dia manampy amin'ny fanesorana ireo vala eo amin'ny kibo, izay miforona ao amin'ireo izay mitarika lamosina. Mankanesa ao amin'ny vavanao ary tazony ny tongotrao mivantana ary apetaho amin'ny tongotra ny tongotrao. Mifampitantana ny tanana, ataovy eo amin'ny tany ny palmie eo akaikin'ny tandroka. Atsangano ny lohanao, manapaha tsikelikely ny rivotra, manantona ny sandrinao ary miverena araka izay azo atao. Mandritra izany fotoana izany, atsipazo ny lohanao ary avereno ny soronao. Aza manokatra ny vavanao! Mialà segondra vitsy, dia atokàny ary avereno ao amin'ny toerana niaviany. Avereno in-dimy.
Halasana, na plough. Io fihetsika io dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fahasalaman'ny raboka sy ny rafi-pitabatabana. Mianjera eo an-damosinao, manoloana ny vatanao, palm-nidina, raraka ny tongotra. Rehefa mifoka rivotra, atsangano ny tongotrao, mandra-pahavitanao amin'ny kofehy. Aorian'io, manaova fanatanjahan-tena sy ao anatin'ny dingan'ny fakana aina, ento ny tongotrao eo an-dohanao ary kasiho ny tany. Mijanòna eto mandritra ny fotoana fohy ary miverina any amin'ny toerana voalohany. Avereno in-5.
Sarvangasana, na ny Pose du candle. Ity fampiharana ity dia mitondra tombontsoa lehibe ho an'ny vatana manontolo. Miala amin'ny lamosinao, mifampitantana amin'ny vatana, tongotra mivantana. Tazony ny ainao, atsangano ny tongotrao ary atokàny ny lamosinao ka ny vatanao sy ny tonginao dia mifamatotra amin'ny tsipika tokana. Tazony ao anaty tratra ny minao, miala sasatra ary mifoka rivotra fotsiny. Mandania 1-2 minitra eo am-pelatanana, ampitomboy ny fotoana mandra-pahatonganao 10 minitra. Avy eo tsikelikely, dia mihetsiketsika eny amin'ny tany ny valan'aretina ao ambadiky ny valala.
Yoga, fitomboana kokoa, karazana fampiasana ho an'ny mpandray anjara, mitondra soa be dia be ho an'ny vatana manontolo. Andramo izany ary jereo ny tenanao!
Fampiofanana amin'ny fanalefahana ny fandoroana tavy
Fanatanjahantena ho an'ny fahazoana haingana
Aerobics ao an-trano
Volon-kiran'ny ranomandry ho an'ny volo - ny tsiambaratelon'ny fampiharana
Famonoana sy ny aretim-pivalanana
Inona no ambaran'ny olona iray maty toy ny velona?
Fancy skirts 2014
Tabila mihaja ho an'ny lakozia
Ahoana no hampihenana ny ombilahy?
Iza no vato tsara ho an'ny vehivavy Taurus?
Decoupage ny atodin'ny Paka
Afangaro amin'ny angina
Loko mainty - 26 sary nalaina lamaody nandritra ny fotoana rehetra
Oatmeal miaraka amin'ny banana
T-shirt misy lamina 3d
Zavamaniry misy ranon-tsavony ho an'ny zaridaina - inona no karazam-borona manjavozavo kokoa ho anao?